पुल्चोकमा कु’टिएका प्रहरीको अल्कामा उपचार, शरीरको यी भागमा गहिरो चोट,! – Eshankharapur
Breaking news – लाखौं पुगेको सुनको मुल्य आज सोच्नै नसकिने गरि घट्यो !
२ लाख ७० हजारमा पाइने उत्कृष्ट ३ मोटरसाइकल
रमेश प्रसाईको लागि टिका सानुले गाईन् यस्तो गीत (भिडियो)
सुत्ने बेला सिरानी मुनी तुलसीको ५ पात राख्नुस अनि हेर्नुस चमत्कार
पाथिभरा माताले सबैको मनोकामना पुरा गरुन, असोज ११ गते आइतबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
२ बर्षकी छोरीको लाश प्लास्टिकमा लपेटेर मोटरसाइकल लग्दै गरेको कारण खुल्दा दुनियाँकै ह्दय रसायो
सैनिक विमान दु`र्घ`टना हुँदा २६ जनाको ज्या`न गयो, राष्ट्रिय शोकको घो`षणा !
मुख्य पृष्ठ /News/पुल्चोकमा कु’टिएका प्रहरीको अल्कामा उपचार, शरीरको यी भागमा गहिरो चोट,!
पुल्चोकमा कु’टिएका प्रहरीको अल्कामा उपचार, शरीरको यी भागमा गहिरो चोट,!
काठमाडौँ, भदौ १८। बिहिबार सामाजिक संजालमा एक भिडियो भाइरल बन्यो। जसमा रातो मछिन्द्रनाथको रथ तान्ने विषयमा पुल्चोकमा प्रदर्शनको लागि उत्रिएका प्रदर्शनकारीले एक प्रहरी जवानलाई आ-क्रमण गरेका छन्। उक्त भिडियोमा केहि युवा जमातले एक प्रहरी जवानको मोटरसाइकल खोसेर उनीमाथि जाइलागेका थिए।
बिहीवार बिहानैदेखि पुल्चोकमा भैरहेको प्रदर्शन बिहान ११ बजेसम्म सामान्य थियो तर दिउसो १ बजेपछि भने स्थिति सम्हाल्न नसक्ने बनेको हो । त्यसपछि प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झ’डप सुरु भयो र प्रहरीले अश्रु ग्यास, प्रदर्शनकारीले ढुंगा बर्साउन थाले।
यही झ’डपको बिचमा बिहानैदेखि ड्युटीमा खटिएका प्रहरी जवान कमल प्रसाद घिमिरे परे। जबकि उनको भूमिका भिडलाई नियन्त्रण गर्ने थिएन। उनि सवारी व्यवस्थपनका लागि खटिएका थिए। तर उनले अनावश्यक रुपमा कु’टाइ खाए र उनको मोटरसाइकल समेत ज-लाईयो। उनको अहिले अल्का अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। उनको टाउको, हातखुट्टा, ढाडमा गहिरो चो’ट लागेको छ। आ’न्दो’लनकारीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएर ७ सय मिटर परसम्म लगेर कु’टपिट गर्दै गर्दा प्रहरीको टोलीले उनको उद्धार गरेको थियो।
घिमिरेमाथि प्रदर्शनकारीले गरेको यस्तो निर्मतापूर्वक आ’क्रमणलाई असह्य भएको भन्दै सामाजिक संजाल प्रयोगकर्ताहरुले आक्रोश पोखिरहेका छन्।
काठमाडौँ मा प्रहरी जवान र नक्कली डाक्टर प`क्राउ
बल्ल बाहिरियो धरानकी सोनु मृ’त्यु प्रकरणबारे ड’रलाग्दो रहस्य(भिडियो)
भारतले धौलीगङ्गा बाँध फेरी खोल्ने, नेपालमा जोखिम !
आज महानायक राजेश हमालको जन्म दिन, कति औं वर्षमा पुगे ??
कुलमानको कार्यकाल सकियो, प्रधानमन्त्री ओलीले कुलमानलाई भेट्न पनि चाहेनन्